Cabdirashiid Janan Oo Socdaal Ku Tegay Magaalada Addis Ababa Iyo Ujeedkiisa – Great Banaadir
ADDIS ABABA – Wasiirkii hore ee Amniga Dowlad Goboleedka Jubbaland Cabdirashiid Xasan Cabdinuur Janan ayaa Safarkii ugu horreeyay ku tegay Magaalada Addis Ababa ee Caasimadda Dalka Itoobiya tan iyo markii uu isku soo dhiibay Dowladda Federaalka Soomaaliya.
Warar la helayo ayaa sheegaya in Ujeedka Safarka Wasiirkii hore ee Amniga Dowlad Goboleedka Jubbaland Janan ee Itoobiya uu yahay mid ku saabsan Dhaq-dhaqaaqyada Gobolka Gedo ee Dowlad Goboleedka Jubbaland.
Sidoo kale Wararka ayaa intaas waxaa ay kusii darayaan in Socdaalka Janan uu Salka ku haayo Arrimo Baasaboor uu doonayo inuu sameeysto, waana Safarkii ugu horreeyay ee uu Magaalada Muqdisho uga baxay tan iyo marki uu isku soo dhiibay Dowladda.
Cabdirashiid Xasan Cabdinuur Janan ayaa Bishii Maarso (March) ee Sandkaan 2021 isku soo dhiibay Dowladda Federaalka, isla markaana Heshiis la galay, iyadoona Wadahadalo iyo Heshiika uu hoggaaminayay Wasiiru Dowlaha Gaadiidka Cabdiraxmaan Dheere.
Heshiiska Wasiirkii hore ee Amniga Janan iyo Dowladda dhexmaray ayaa waxaa qeyb ka ahaa in Ciidamo daacad u ahaa iyo Hub ay wateen uu ku wareejiyo Dowladda Federaalka, kuwaasoo haatan ku jira Xero ku taalla Gobolka Gedo.
Faahfaahino Kasoo Baxaya Qarax Ka Dhacay Magaalada Muqdisho